Bit By Bit - Ịmepụta mmekọrịta ọnụ - eme
Ụdị nsogbu: dị mfe , ọkara , siri ike , siri ike
chọrọ mgbakọ na mwepụ ( )
chọrọ ederede ( )
nchịkọta data ( )
ndị ọkacha mmasị m ( )
[ , , , ] Otu n'ime ihe ndị na-enye obi ụtọ Benoit na ndị ọrụ ibe ya ' (2016) nyocha banyere nchịkọta ọnụ ọgụgụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ na a rụpụtara ihe ndị a. Merz, Regel, and Lewandowski (2016) enye ohere maka Manifesto Corpus. Gbalịa mụta nwa 2 si Benoit et al. (2016) eji ndị ọrụ si Amazon Mechanical Turk. Kedu otu ihe si pụta?
[ N'ọrụ ọrụ InfluenzaNet, otu ndị ọrụ afọ ofufo nke ndị mmadụ na-akọ banyere ọnọdụ, mgbasa ozi, na omume ahụike na-achọ na ọrịa na-arịa ọrịa influenza (Tilston et al. 2010; Noort et al. 2015) .
Tụlee na iche ọdịiche ahụ, ụgwọ, na ikekwe njehie na InfluenzaNet, Google Flu Trends, na sistemụ nsụgharị ọgwụ influenza.
Tụlee oge na-agwụ agwụ, dịka ntiwapụ nke ụdị mmịnye dị iche iche. Kọwaa mmejọ omume na usoro ọ bụla.
[ , , ] Economist bụ magazin akụkọ kwa izu. Mepụta ọrụ nyocha mmadụ iji chọpụta ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ndị inyom na ndị ikom na mkpuchi agbanweela oge.
Magazin nwere ike ịnwe ihe dị iche iche na mpaghara asatọ dị iche iche (Africa, Asia Pacific, Europe, European Union, Latin America, Middle East, North America, na United Kingdom) na ha nile nwere ike ibudata na ebe nrụọrụ weebụ na magazin. Họrọ otu n'ime mpaghara ndị a ma mee nyocha ahụ. Jide n'aka na ịkọwa usoro gị n'ụzọ zuru oke na onye ọzọ nwere ike ịmegharị ya.
Ajụjụ a sitere n'ike ọrụ yiri nke a site n'aka Justin Tenuto, bụ ọkà mmụta sayensị na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na CrowdFlower: lee "Time Magazine Really Likes Dudes" (http://www.crowdflower.com/blog/time-magazine-cover-data) .
[ , , ] Iwuli na ajụjụ gara aga, ugbu a mee nyocha maka mpaghara asatọ.
Olee ọdịiche ị hụrụ n'akụkụ mpaghara?
Ogologo oge na ego ka ọ na - ewe iji mee ka nyochaa gị na mpaghara asatọ niile?
Were ya na Economist nwere ihe dị iche iche n'izu ọ bụla. Mee atụmatụ maka oge ole na ego ga - ewe iji gbasaa nyocha gị ruo 100 iko kwa izu.
[ , ] E nwere ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ nke na-akwado ọrụ ịkpọghe oghe, dịka Kaggle. Soro na otu n'ime ọrụ ndị ahụ, ma kọwaa ihe ị mụtara banyere ọrụ ahụ na banyere ịkpọghe oku n'ozuzu.
[ ] Lelee anya na mbipụta ọhụrụ nke akụkọ na ubi gị. Enwere akwụkwọ ọ bụla a ga-eme mgbanwe dị ka ọrụ oku a na-emeghe? Ntak-a ma ọ bụ ihe kpatara ya?
[ ] Purdam (2014) akọwa nchịkọta data natara gbasara ịrịọ na London. Chịkọta ihe ndị a na-eme na adịghị ike nke nyocha a.
[ ] Mgbapụta bụ ụzọ dị mkpa iji nyochaa àgwà nke nnakọta data nchịkọta. Windt and Humphreys (2016) mepụtara ma nwalee usoro iji chịkọta akụkọ banyere esemokwu ndị si na Eastern Congo. Na-agụ akwụkwọ.
Kedu ka atụmatụ ha si eme ka a ghara ịbanye?
Ha nyere ọtụtụ ụzọ iji gosipụta data anakọtara site na ọrụ ha. Kpọkọta ha. Kedu nke kacha kwenye n'aka gị?
Na-egosi ụzọ ọhụrụ a ga - esi mezi data ahụ. Aro ndị a kwesịrị ịgbalị ime ka obi sie gị ike na ị ga-enweta data ahụ n'ụzọ na-efu ma dị mma.
[ Karim Lakhani na ndị ọrụ ibe (2013) mepụtara oku a na-akpọghe iji rịọ maka algọridim ọhụrụ iji dozie nsogbu na usoro nhazi. Ha natara ihe karịrị 600 ntinye nke nwere ihe odide kọmputa nke 89. N'ime nnyefe ahụ, 30 karịrị ọrụ nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ahụ Ike nke United States, na nrubeisi kachasị mma na-enweta ma ọ bụrụ na ọ dị oke ziri ezi na ọsọ (ugboro 1,000).
Na-agụ akwụkwọ ha, ma gwazie gị otu nsogbu ịchọta ọha na eze nwere ike iji otu ụdị mmeghe ahụ. Karịsịa, ụdị mmepe a na-emeghe na-elekwasị anya na-agba ọsọ ma melite arụmọrụ nke algorithm dị. Ọ bụrụ na ịnweghị ike iche nsogbu dịka nke a na ubi gị, gbalịa ịkọwa ihe kpatara ya.
[ , ] Ọtụtụ ọrụ nhazi mmadụ na-adabere na ndị mepụtara site na Amazon Mechanical Turk. Debanye aha ịghọ onye ọrụ na Amazon Mechanical Turk. Tinye otu awa na-arụ ọrụ n'ebe ahụ. Kedu ka nke a si emetụta echiche gị banyere atụmatụ, àgwà, na ụkpụrụ omume nke ọrụ nchịkwa mmadụ?